Evaporative mhepo inodzora
XIKOO inozivikanwa inotakurika maindasitiri emhepo inotonhorera muzhizha rinopisa
Muzhizha, maindasitiri zvirimwa uye imba yekuchengetera inonyanya kupisa. Matenga mazhinji edzimba nedura ndeye iron sheet zvinhu, zviri nyore kutora kupisa uye kupisa. Uye kune akawanda anoshanda heater michina uye vashandi ipapo. Saka musangano uye imba yekuchengetera inotonhorera zvakakosha zvikuru. Sezvo pane marara gasi emissi ...
XIKOO nharaunda inoshamwaridzika yezuva evaporative mweya inotonhorera
Nekuda kwekupisa kukuru kwesimba remafuta, zvakakonzera kusvibiswa kwezvakatipoteredza zvepasi rose uye kukuvara kwezvakatipoteredza, zvichikonzera kutyisidzira kupona kwevanhu nekusimudzira. Nyika dzese dzakakomberedza izwi tevera nekuisa kukosha mukushandiswa kwesimba rezuva. XIKOO yakatsaurirwa mune yakaderera mashandisiro ...
Evaporative mweya inotonhorera inobatsira pakuponesa kwesimba uye kudzikira kudonhedza
Nekuumbwa uye kuitiswa kwe "National Standard yeEvaporative Mhepo Inotonhorera Yezvekutengesa kana Yekushandisa Maindasitiri", evaporative kutonhora tekinoroji yakave yakamisikidzwa uye yakamisikidzwa, uye zvimwe zvigadzirwa zvinoponesa simba senge inochengetedza zvakatipoteredza ...
Changlong Boka rinotenga evaporative mhepo inotonhorera kubva kuXIKOO
Guangzhou Changlong Boka rine ma investments akawanda muzvivakwa, mapaki ekuvaraidza, nzvimbo dzinochengeterwa mhuka, nezvimwewo. XIKOO Mhepo Inotonhorera uye Changlong Boka vanga vachishandira pamwe kwemakore masere. Mapaki avo mana makuru, anosanganisira Shiri Paradhiso, Water Park, Inofara Nyika (kunyanya ...
Zvikonzero zvehurombo kutonhora mhedzisiro yeindasitiri evaporative mweya inotonhorera
Iyo inotonhorera mhedzisiro yeindasitiri evaporative mweya inotonhorera yakanaka, iyo inozivikanwa kana yakamboshandiswa. Asi, kana paitika tsaona, kana iko kutonhora kushanda kusiri kwakanaka, iwe unoziva chikonzero chiri chii? 1, hapana convection: indasitiri evaporative mweya inotonhorera yakanangana neinoenderana nemhepo nzira, haigone kushandiswa ...
Nyaya dzinoda kutariswa kana uchishandisa simba rekuchengetedza inotakurika evaporative mweya inotonhorera
Environmental mhepo inotonhorera, inotakurika evaporative mweya inotonhorera ine zvakanakira yakanaka kutonhora mhedzisiro, kufefetedza uye kutonhora, simba kuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Kushandisa inotakurika evaporative mweya inotonhorera kutonhodza pasi isarudzo yakanaka, asi kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune zvimwe zvinhu kana uchishandisa, o ...
XIKOO mhepo inotonhorera inounza kutonhorera kune vashandi vekurapa
Mukutanga kwaJune wa2021, Kwakave kwakabuda akati wandei COVID-19 kesi dzakatapukirwa. Guangzhou hurumende yemuno yakaisa kukosha kwazvo pairi, uye yakatora matanho nekukasira kuita nucleic acid bvunzo kune vese vagari vemuGuangzhou. Gadza akawanda nucleic acid ekuyedza mapoinzi munharaunda. Vashandi vekurapa vanoshanda nesimba uye o ...
Musiyano uripo pakati petsika nemhepo zvinodzora uye zvakatipoteredza zvine hunyanzvi evaporative mweya inotonhorera.
Mazhinji echinyakare emhepo mahara haanyanyi kugarisana nharaunda uye anoshandisa rakanyanya simba simba. Naizvozvo, kuchengetedza-simba uye kugarisana nharaunda Inotakurika evaporative mweya inotonhorera zvishoma nezvishoma inotsiva echinyakare mweya maac ... Inotakurika evaporative mweya inotonhorera ine yakaderera simba Cons ...
Inotakurika evaporative mweya inotonhorera
Inotakurika evaporative mweya inotonhorera ine hunhu hwehukuru hushoma, yakakwira simba kunyatsoshanda reshiyo, yakaderera ruzha, hapana kuiswa, uye inogona kuiswa mudzimba dzakasiyana pamadiro, uye inoshandiswa zvakanyanya. Inotakurika evaporative mweya inotonhorera ine akasiyana akasiyana zvishandiso senge mafeni, kutonhora maketeni emvura, ...
XIKOO mhepo inotonhorera inotora chikamu mukurwisa denda
isu vanhu takatanga kutarisana nemuedzo wakakura we COVID-19 kubva kumagumo e2019.Iyo yakapararira zvine simba kwazvo, kuomarara kwakanyanya, uye isu kuchengetedzeka kwevanhu kwakakanganisa zvakanyanya. Nekudaro, vashandi vekurapa zvisinei nekuchengetedzeka kwavo, vakauya kumberi kwehondo. Ndatenda avo vashandi vekurapa avo ...
Iyo inoshanda musimboti inotakurika mweya inotonhorera uye yekuchengetedza ruzivo rweiyo inotonhora pad
ne admin pane 21-05-28
Inotakurika mhepo inotonhorera ine akasiyana siyana madhiraivhu senge mafeni, kutonhora pad, pombi dzemvura, uye matangi emvura. Muviri unoshongedzerwa nepulagi yemagetsi uye neremote control. Chassis base ine zvigadziri zvina, izvo zvinogona kuita inotakurika mweya inotonhorera kufamba sezvaunoda uye rega kutonhorera kuende. Basa racho ...
Kushandisa kwakakura kweinotakurika evaporative mweya inotonhorera mumaindasitiri akasiyana siyana
Inotakurika evaporative mweya inotonhorera inofarirwa nemafekitori nemabhizinesi nekuda kwekunakirwa kwavo kwekutonhodza, kufefetedza, kuchengetedza simba uye zvisikwa zvine hushamwari. Parizvino, inotakurika mweya inotonhorera yave ichishandiswa zvakanyanya mumaindasitiri makuru. Inotakurika mhepo inotonhorera ndeyezvakatipoteredza s ...